Kuendesa Juicy bouquet muMoscow - odha maruva
Discount 100 maRuble mukushandisa! Dhawunirodha app
Discount 100 maRuble mukushandisa!
kuti Sarudza imwe
Kusvikira 2000 rubles
2 - 000 maRubles
3 - 000 maRubles
5 - 000 maRubles
9 - 000 maRubles
Kubva ku13000 rub
45 masendimita 40 masendimita
100 ₽ dhisikaundi muchikwereti
Dhirivhari ~ 2h., mahara muMoscow
Maruva emaruva matsva anopinda musalon yedu, iwe unobva wangonyura mumhepo yerunako uye hwema hwemaruva achangobva kutemwa. kune mumwe mushanyi, maruva eiyo bouquet kana kuumbwa anosarudzwa zvakasiyana. bouquets kubva kuwirirana inogara iine hwema hunoshamisa, ivo vakasarudzika! bouquet, inoshandurwa kubva kuFrance, i "boka remaruva akasungirirwa neribhoni." vatengesi vemaruva - Shopu Yedu inoisa mweya yavo mukugadzira chinyorwa kana maruva. Ruvara runotamba basa rakakosha mukugadzira inoenderana bouquet.
uye isiri-mari yezvinhu zviri pamutemo
Bouquet uye muimbi akasimbiswa
Upamhi 40 cm
Kureba 45 cm
Ruva - 19 pcs.
Strawberries (Strawberries) - 29 bv.
10 wongororo nezve iro basa remuruva:
Igor naSveta 03-05-2020
Pamazuva akaoma ekoronavirus ekuzvimiririra, yakasarudzika sarudzo yekukorokotedza shamwari pazuva ravo rekuzvarwa. Ndatenda!!!
Irina A. Luzhina 28-04-2020
Dhirivhari nekukurumidza uye nenguva! Maruva acho matsva, akarongedzwa zvakanaka. Mhando dzakasiyana dzemaruva panguva iyo maruva anonetsa kuwana. Ndokutenda zvikuru!!!
Ndatenda, zvese zvakanaka uye zviri panguva
Bouquet Super Duper kuendesa nenguva !!!!!!! Ndokutenda zvikuru!!!!!!!
Ndakaraira mukadzi wangu kuti ade zvese, kunyangwe ma strawberry acho aitapira. Chinhu chega chingave chiri nyore kana kubatana nemutumwa kwakananga kuitira kuti nguva yekusvika igone kujekeswa, zvikasadaro zvese zvakanaka. Yakarairwa na18: 00, yakaunzwa kuma22: 00 nekukasira.
Karpova Natalia Valerevna 21-11-2019
Ndokutenda zvikuru! Musikana wekuzvarwa anofara! Isu, zvakare. Ndokutenda zvikuru! Zvese zvinhu chaizvo chaizvo, panguva uye, chokwadika, zvakanaka. Ndinokurudzira kune wese munhu!
Irina Mirkova 18-09-2019
Kwenguva yakareba ini ndaisakwanisa kusarudza kuti ndeupi bouquet yekusarudzira amai vangu pazuva ravo rekuzvarwa. Anoshanda akabatsira nesarudzo, amai vangu neni takafara kwazvo.
Ini ndaida kupa murume wangu chipo chebhavhadhe uye kuodha yakanaka maruva machena maruva. Zvese zvakaitwa uye zvakagadzirwa zvakakwana, ndinofara.
Iye murume anodikanwa akapa 101 maroses kuendesa munaFebruary 14. Uye paakasvika, akandipfimba. Mushure memahombekombe akadaro, ini handina kukwanisa kuramba.
Nice ruva kuendesa sevhisi! Haufanire kumirira kwenguva refu, ndinowana iwo maruva mune akanaka mamiriro. Kana iri chero zororo, saka ini ndinoraira maruva chete pano.
Kuunzwa kwemahombekombe ega ega kunovimbiswa Floristum.ru
Iyo kontrakta haigamuchire mubhadharo mune chiitiko chemhando yemhando.
Ko mushure mekubhadhara odha?
Florist anokutumira iwe simbiso yekusimbisa
Unganidza maruva emaruva matsva
Maruva kuendesa kune anogamuchira
Ndokumbira usiye mhinduro pamusoro pekutakura kwemaruva
Ruva - 255 pcs.
Kupinda yedu salon, iwe unobva wangonyura mumhepo yerunako uye hwema hwemaruva achangobva kutemwa. Maruva emaruva kana kuumbwa anosarudzwa zvakasiyana kune mumwe nemumwe mushanyi. Maruva kubva kuHarmony anogara aine hwema hunoshamisa, ivo vakasarudzika! Maruva, akashandurwa kubva kuFrench, i "boka remaruva akasungirirwa neribhoni." Vaflorist Harmony - yedu salon inoisa mweya yavo mukugadzira chimiro kana bouquet. Ruvara runotamba rakakosha basa mukugadzira inoenderana bouquet. Maruva mufananidzo wakasarudzika wemaruva akasiyana siyana kana maruva ehurefu hwakaenzana.
Raira Iye zvino
26719 ₽ Bouquet 007
mumaawa maviri maminitsi makumi matatu
Tumira kunyorera chinongedzo
Ruva - 21 pcs.
3961 ₽ Bouquet nhamba 296
Mumwe-musoro akamuka - 55 bv.
Kurongedza - 2 pc.
Maruva emaruva matsva anopinda musalon yedu, iwe unobva wangonyura mumhepo yerunako uye hwema hwemaruva matsva akachekwa. kune mumwe mushanyi, maruva eiyo bouquet kana kuumbwa anosarudzwa zvakasiyana. bouquets kubva kuwirirana inogara iine hwema hunoshamisa, ivo vakasarudzika! bouquet, inoshandurwa kubva kuFrance, i "boka remaruva akasungirirwa neribhoni." florists kuwirirana - maruva anoisa mweya yavo mukugadzira chimiro kana bouquet. Ruvara runotamba basa rakakosha mukugadzira inoenderana bouquet.
9343 ₽ Bouquet nhamba 238
Ruva - 101 pcs.
11978 ₽ Bouquet nhamba 233
Strawberries (Strawberries) - 21 bv.
Mumwe-musoro akamuka - 19 bv.
Bouquets edu anoita chero zororo rikanganwike, rakajeka uye rine mavara. ivo chaidzo uye vapenyu, kunyangwe vachiita kunge zvisikwa zvakaisvonaka. Mambokadzi akadaro wemaruva haazosiyi chero munhu asina hanya, nekuti hazvishamise sei kuwana rose nerakajairika ruvara sechipo. iwo maruva avo anoenderana nezororo remafaro, kupemberera muchato, kana kungo fadza mudiwa. kunyangwe ivo vane ruzivo rwemberi rwekunaka havagone kubatsira kunyemwerera.
3552 ₽ Bouquet nhamba 331
Dendrobium - gumi bv.
2522 ₽ Dendrobim
Tulip - 49 bv.
6379 ₽ Bouquet nhamba 330
Ruva - 25 pcs.
4484 ₽ Bouquet nhamba 237
Strawberries (Strawberries) - 31 bv.
3915 ₽ Bouquet nhamba 242
Maruva ese ...
Mitauro yese ...
Kuvhura sei chitoro
kune vanobatana vatengi
Pinda kune yako account
Public public offer
Ruzhinji rwevanhu kupa kwekupedzisa kwekutenga nekutengesa chibvumirano
Chitoro chemaruva muMoscow:
Moscow, Vodoprovodny nzira d2 st1
Iyo Anwendung inobatsira uye iri nyore!
Discount 100 maRubles kubva kune bouquet mune iko kunyorera!
Dhawunirodha app Floristum kubva kuiyi link mu sms:
tumira chinongedzo neSMS *
Dhawunirodha iyo app nekukenya iyo QR kodhi:
* Nekudzvanya pane bhatani, iwe unosimbisa kugona kwako kwepamutemo, pamwe nekutendera Yakavanzika Mutemo, Chibvumirano chedata rako pachako и Ruzhinji kupa